गोरखापत्रमा अध्यक्ष विष्णु सुवेदीको मनोमानी : नियम विपरित कर्मचारी भर्ति गरेको खुलाशा ! | Diyopost - ओझेलको खबर गोरखापत्रमा अध्यक्ष विष्णु सुवेदीको मनोमानी : नियम विपरित कर्मचारी भर्ति गरेको खुलाशा ! | Diyopost - ओझेलको खबर
गोरखापत्रमा अध्यक्ष विष्णु सुवेदीको मनोमानी : नियम विपरित कर्मचारी भर्ति गरेको खुलाशा !
दियो पोस्ट बिहिबार, मंसिर ०२, २०७८ | २२:०९:५२
काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले संस्थानलाई आफ्ना मान्छेको ‘भर्तिकेन्द्र’ बनाएको खुलेको छ । यसअघि व्यावसायीक छवि बनाएका पत्रकार सुवेदीलई सरकारले संस्थानको अध्यक्ष नियुक्त गरेसँगै संस्थानको स्वरुप फेरिने आशा गरिएको थियो । तर, उनले आफू निकट व्यक्तिहरुलाई गोरखापत्र संस्थानमा विनियमावली विपरित करारमा नियुक्त गरेको खुलेपछि उनीमाथिको आशा निराशामा परिणत भएको छ । यो घटनाले सुवेदी पनि पुरानै नेतृत्वकै शैलीमा अगाडी बढेको आरोप गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारीले लगाउन थालेका छन् ।
विगत ३ वर्षदेखि बढुवा र पदोन्नती नभएर बसेका कर्मचारीले सुवेदी नेतृत्वमा आउने वित्तिकै ‘अब त बढुवा र पदोन्नती हुन्छ’ भन्दै आशा गरेका थिए । तर, सुवेदीले पुराना कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै आफू निकट र आफू पहिले काम गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई गोरखापत्रमा करारमा नियुक्ती दिलाएर गोरखापत्रकै पुराना कर्मचारीमाथि अन्याय गरेका छन् ।
कर्मचारी बिनियमावली र लोकसेवा आयोगको समेत सहमति नलिई उनले संस्थानको विभिन्न तहमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती दिलाएका हुन् । यहि कार्तिक ३० गतेको निर्णय अनुसार मंसिर १ गतेदेखि नै लागु हुनेगरि करारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई मनोमानी हिसाबले नियुक्त गरिएको गोरखापत्र संस्थान स्रोतले जनाएको छ । लम्जुङ घर भएका विनोद न्यौपानेलाई सातौँ तहमा करारमा नियुक्त गरेर गोरखापत्रको उपसम्पादकको जिम्मेवारी दिइएको छ । सुर्य प्रसाद पाण्डेलाई पनि गोरखापत्रकै ७ औँ तहमै नियुक्ती दिइएको छ । त्यस्तै दिनेश लुँइटेललाई पनि ७ औँ तहमा करारमा नियुक्ती दिलाइएको छ ।
उनी सुवेदीसँगै अन्नपूर्ण पोस्टमा काम गरेको गोरखापत्र संस्थान स्रोतले बतायो । यद्धपी लुइँटेल क्षमतावान पत्रकार हुन् । गुल्मीका मित्रलाल भण्डारीलाई छैटौँ तहमा नियुक्ती दिइएको छ । धनकुटाका लोकबहादुर कटुवाललाई पनि छैटौँ तहमा नियुक्त गरिएको छ । उनलाई अनलाइन सेक्सनमा जिम्मा दिएको छ । धादिङका गोविन्द रेग्मी अनलाइन सेक्सन हेर्नेगरि छैटौँ तहमा भर्ति भएका छन् । ललितपुर ठेगाना भएका सुनम महर्जन अनलाइन हेर्नेगरि छैटौँ तहमा नियुक्त भएका छन् । गुल्मीकै सृजना खत्री पनि छैटौँ तहको तलब खानेगरि अनलाइन विभागमा भर्ति भएकी छिन् । अशोक अधिकारीलाई पनि सोही तहमा नियुक्त दिइएको छ । सप्तरीका धुर्बकुमार सिंहलाई कम्प्युटरमा नियुक्त गरिएको छ । उनलाई पाँचौँ तहको तलब भत्ता व्यवस्था गरिएको छ । सिन्धुलीका युवराज खतिवडा पनि व्यापार प्रवद्र्धनको नाममा ५ औँ तहमा नियुक्त भएका छन् ।
सातौँ तहको कर्मचारी खुला प्रतिष्पर्धाबाट भन्दा पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट ल्याउने परम्परा छ । सातौँ तहका कर्मचारीले मासिक ४० हजार १ सय ८५ रुपैयाँ तलब, २५ सय रुपैयाँ पोशाक भत्ता, साप्ताहिक विदा र ६ महिनापछि दशैंको पेशी पाउँछन् ।
छैटौँ तहका कर्मचारीले ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ मासिक तलब, पोशाक भत्ता र ६ महिनापछि दशैँ पेशी पाउँछन् । पाचौँ तहको कर्मचारीले मासिक ३० हजार २ सय रुपैयाँ तलब, २५ सय पोशाक भत्त र ५ महिनापछि दशैँ पेशी पाउँदै आएका छन् । यसरी विनयमावली विपरित कर्मचारी नियुक्ती गर्नुअघि लोकसेवा आयोगबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर, सुवेदीले लोकसेवा आयोगबाट कुनै अनुमति नलिएको स्रोतले बतायो । सुवेदीले यसअघि गैरकानुनी रुपमा जिल्लामा रहेका स्टिन्जरलाई हटाएर आफू अनुकुल मान्छे भर्ति गरेका थिए । अहिले कार्यालयमा पूर्वाधार समेत नभएको अवस्थामा आफ्ना मान्छे भर्ति गरेको भन्दै गोरखापत्रका इमान्दार कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन् । तर, दलका विभिन्न संगठन भने मौन छन् । यसअघि सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले नियुक्त गरेका उनका मान्छेले समेत अनलाइन विभागमा कम्प्युटर पाएका छैनन् ।
‘अनलाइनमा त उभिने ठाउँ समेत छैन । संस्थानको आर्थिक स्थिति जरजर छ । यसअघि सञ्चारमन्त्रीले ल्याएका आफ्ना मान्छेहरु टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक कर्मचारीले भने,‘तर, फेरी नयाँ अध्यक्षले आफ्ना मान्छे भर्ति गरेर यसअघि ओली सरकारले गरेको गलत क्रियाकलापको निरन्तरता भएको छ । यसले संस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।’
बिहिबार, मंसिर ०२, २०७८ | २२:०९:५२
नेपाल वायुसेवा संघले भन्यो(‘बेपत्ता विमान लार्जुङ क्षेत्रमा…
नेपाल वायुसेवा संघले भन्यो(‘बेपत्ता विमान लार्जुङ क्षेत्रमा ‘लोकेट’ भएको छ’